ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအမြင် (ရုပ်သံ)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအမြင် (ရုပ်သံ)
Khin Maung Lay said...
Very noisey record!
ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဒီတခါ အယူအဆ သိပ်ညံ့ပါတယ်။ အားလုံးက စစ်တပ်လက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ စစ်တပ်စိတ်ကြိုက် ကစားကွက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမှာကို လုံးဝ မစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမှာ ကြောက်နေတာက စစ်တပ်ဆင်ကွက်ထဲ ရောက်နေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။